Artist Min Kyi >>
Activities 2019 >>
Activities 2018 >>
We donated Artist Min Kyi's two paintings to National Museum, Yangon, Myanmar at 17 March 2018.
ပန်းချီဆရာဦးမင်းကြည်​၏ ပန်းချီကား နှစ်​ချပ်​ကို ရန်​ကုန်​အမျိုးသားပြတို​က်​သို့ မတ်​လ ၁၇ရက်​ ၂၀၁၈မှာ လှူ ဒါန်းခဲ့ပါတယ်​ရှင်​။
We will make the free exhibition of artist Min Kyi (Not for sale) in Yangon Museum from 17th March 2018 to 24th March 2018. Everybody can come and see the art gallery to recognize artist Min Kyi. We will treat some food and drink everybody who will come and see the exhibition. In the exhibition days, we will give artist Min Kyi book to the first 50 visitors everyday. Therefore you should come and see early to get artist Min Kyi book.
ကျွနု​ပ်​တို့သည်​ ရန်​ကုန်​အမျိုးသားပြတိုက်​တွင်​ မတ်​လ ၁၇ရက်​​နေ့မှ ၂၄ရက်​​နေ့အထိ ပန်းချီဆရာဦးမင်းကြည်​၏ ပန်းချီကားများကို ပြသသွားမှာဖြစ်​ပါတယ်​ရှင်​။ (ပန်းချီကားများကို ​ရောင်းချမည်​မဟုတ်​ပါရှင်​။) မည်​သူမဆို အခမဲ့ လာ​ရောက်​ကြည့်​ရူ​လေ့လာပါရန်​ လှိုက်​လှဲစွာဖိတ်​​ခေါအပ်​ပါတယ်​ရှင်​။ လာ​ရောက်​ကြည့်​ရူသူများကို အစားအစာနှင့်​ ​ကော်​ဖီများဖြင့်​ တည်​ခင်းဧည့်​ခံသွားမှာဖြစ်​ပါတယ်​ရှင်​။ ​ပြပွဲရက်​အတွင်း ​နေ့စဉ်​ ပထမဆုံးလာ​ရောက်​ကြည့်​ရှုသူ အ​ယောက်​ ၅၀ ကို ပန်းချီဆရာ ဦးမင်းကြည်​စာအုပ်​ကို လက်​​ဆောင်​​ပေးသွားမှာဖြစ်​လို့ အမြန်​ဆုံးနှင့်​ အ​စောဆုံးလာ​ရောက်​ပြီး စာအုပ်​ရယူလိုက်​ပါရှင်​။
Anybody can bring artist Min Kyi's collections to show in the exhibition and can take back yours after the exhibition. If you want to join in the exhibition, please contact to (+95) 095163239.
မည်​သူမဆို ပန်းချီဆရာ ဦးမင်းကြည်​၏ ပန်းချီကားများရှိပါက ပြပွဲတွင်​လာ​ရောက်​ပူး​ပေါင်းပါဝင်​ပြသနိုင်​ပါတယ်​ရှင်​။ ပြပွဲပြီးပါက မိမိတို့ ပန်းချီကားများအား ပြန်​လည်ယူ​ဆောင်​သွားနိုင်​ပါတယ်​ရှင်​။ ပူး​ပေါင်းပါဝင်​ပြသလိုသူများအ​နေဖြင့်​ ဖုန်း (+95) 095163239 သို့ ဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါတယ်​ရှင်​။
'Min Kyi Vs Monet' exhibition will be showed in Myanmar. Everybody can come and see and feel in Monet's collections. Everybody can read Ten books of Monet's collections in the exhibition.
'Min Kyi Vs Monet' ပြပွဲကိုလည်း မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ များမကြာမှီ ကျင်းပပြုလုပ်​သွားမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ မည်​သူမဆို ပန်းချီဆရာ ဦးမင်းကြည်​နှင့်​ ပန်းချီဆရာမိုးနတ်​ တို့၏ပန်းချီလက်​ရာများကို လာ​ရောက်​ကြည့်​ရှု​လေ့လာခံစားနိုင်​​အောင်​လို့ ရည်​ရွယ်​ထားပါတယ်​ရှင်​။ ပန်းချီဆရာမိုးနတ်​၏ စာအုပ်​ ၁၀အုပ်​ကိုလည်း ​လေ့လာဖတ်​ရှုနိုင်​ရန်​ ထည့်​သွင်းပြသ​ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်​ပါတယ်​ရှင်​။
we have done the press show and book introduction of Artist Min Kyi from 1pm to 3pm on 15 March 2018 at Central hotel, Yangon, Myanmar.
ရန်​ကုန်​မြို့ ဗိုလ်​ချုပ်​လမ်းမ​ပေါရှိ Central Hotel မှာ ​၁၅ရက်​ ၃လ ၂၀၁၈ နေ့လည်​ ၁နာရီမှ ၃နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်​ခဲ့​သော ပန်းချီဆရာဦးမင်းကြည်​၏ စာနယ်​ဇင်းရှင်းလင်းပွဲနှင့်​ စာအုပ်​မိတ်​ဆက်​ပွဲ ပုံရိပ်​များ
Artisit Min Kyi's press show and book introduction is from 1pm to 3pm on 15 March 2018 at Central hotel, Yangon, Myanmar. Welcome to everybody who is interested. Thank you.
၁၅.၃.၂၀၁၈ ​နေ့ခင်း ၁နာရီမှ ၃နာရီအထိ ပန်းချီဆရာဦးမင်းကြည်​၏ စာနယ်​ဇင်းရှင်းလင်းပွဲနှင့်​ စာအုပ်​မိတ်​ဆက်​ပွဲကို Central Hotel, Yangon, Myanmar တွင်​ ပြုလုပ်​မှာဖြစ်​ပါ​သော​ကြောင့်​ မည်​သူမဆို လာ​ရောက်​​လေ့လာပါရန်​ ​နွေး​ထွေးစွာဖိ်​​တ်​​ခေါအပ်​ပါတယ်​ရှင်​။
We will donate Artist Min Kyi's one painting to ICCG which will make Charity Gala dinner and fashion show in Lotte hotel, Yangon, Myanmar at 31 March 2018 from 6:30pm to 10pm.
မတ်​လ ၃၁ရက်​ ၂၀၁၈ ည ၆း၃၀ မှ ၁၀ နာရီအထိ Lotte ဟိုတယ်​မှာ ပြုလုပ်​ကျင်းပမယ့်​ ICCG ပွဲတွင်​ ပန်းချီဆရာဦးမင်းကြည်​၏ ပန်းချီကားတစ်​ချပ်​အား လှူ ဒါန်းပါမယ်​ရှင်​။
This is one of Artist Min Kyi exhibition on March 2018.